IPartir yenye yezenzi eziqhelekileyo zesiFrentshi kwaye ithetha "ukushiya," nangona inokuthi ithathe ezinye iinqununu. Ukuze usebenzise ukuhamba kwiintetho, uya kufuneka ufunde indlela yokuluxubusha . Le isenzi esingaqhelekanga, esenza kube nzima kunabanye, kodwa esi sifundo siya kunceda ufunde indlela yokuyisebenzisa.
Ukudibanisa isiNgesi seVerb
Enoba ufuna ukuthetha "Ndiyahamba," "ushiye," okanye "siya kushiya," kufuneka ukudibanisa.
Ngenxa yokuba uhamba isenzi esingaqhelekanga asihambisani namaphethini afanayo atholakala ngesiFrentshi, ngoko kuya kufuneka uyikhumbule kuzo zonke iifom zayo. Ngexesha uya kuwufunda kwaye, ngenhlanhla, uhamba ngokuqhelekileyo ukuba uya kufumana amaninzi amathuba okuzisebenzisa.
UPartir akayedwa yedwa kwimibutho yayo, nangona kunjalo. Ininzi ezininzi izenzi zesiFrentshi eziphelile-- mir , -tir , okanye -vir zidibaniswa ngendlela efanayo. Oko kuthetha ukuba emva kokuba ufunde enye, isenzi esitsha ngasinye siba lula.
Iifom eziqhelekileyo zokuhamba ziyimizekelo yokubonisa. Ezi ziquka iziko eliphambili, elizayo, nelingafezekanga elidlulileyo oza kusebenzisa rhoqo. Ukusebenzisa le ngotshi yokuqala, qaqa isibhengezo sesifundo kunye nexesha elichanekileyo kwisigwebo sakho. Ngokomzekelo, "Ndiyahamba" i je pars ngelixa "siya kushiya" sis usonsons .
ipaki nxaxheba partais
ipaki ingxenye partais
nxalenye ingxenye yahamba
maqela zokuhamba maqela
partez nxaxheba nxalenye
nxalenye goont bahamba
Umntu okhoyo njengamanje wokuhamba uyahlukana . Oku kwakhiwa ngokungongeza ukuphela-kwisenzi isenzi.
Iilenzi ezifana nokuhamba zifuna ukuba xa zisetyenziswe kwixesha elinamacandelo afana ne- compé passé . Ukwakha eli xesha elidlulileyo, uzakufuna isenzi esixhasayo kunye nexesha elidluleyo lithatha inxaxheba . Ngokomzekelo, "sishiye" sisuke sihambe.
Nangona zingasetyenziswa kangangoko, iifom zokuhamba ziya kubaluleka. Ngokomzekelo, ungasebenzisa ukuzithoba okanye izimo zengqondo zemiqathango ukuze uqinisekise ukungabi nokuqinisekiswa kwisenzo sokushiya. Ngokwahlukileyo, ukuhamba ngokulula nokungafezeki kungaqhelekanga kusetyenziswe ngaphandle kweencwadi zesiFrentshi.
i-parte nxaxheba nxalenye ukuhlukana
nxalenye nxaxheba nxalenye nxalenye
i-parte nxalenye nxalenye bahlule
maqela ukukhetha nxalenye zihlulo
nxalenye partiriez maqabane nxaxheba
nxalenye nxalenye nxalenye hlukana
Xa ufuna ukuthetha into ethi "Hamba!" ungasebenzisa imvakalelo yesenzi . Kule meko, akukho mfuneko yokuquka isibhengezo sesifundo, ngoko nje uthi, " Iipars! "
Iintlobo ezininzi zichaza ukuhamba
I-Partir kakhulu ithetha ukuba "ukushiya" ngendlela eqhelekileyo yokushiya indawo. Kuyinto eyahlukileyo yokufika (ukufika) :
Ndiya kuhamba namhlanje. - Ndiya kushiya ebusuku.
Akhe akhankanywe namhlanje. - Akazange ashiye izolo.
Partir inezinye iinguqulelo ezimbalwa ngokunjalo. Umzekelo, ungasethetha ukuthetha "ukudubula" okanye "ukutshisa":
Le mphulo isuke yonke indawo. - Isibhamu sashiya (sichithwa) sisodwa.
I-bouchon iphume kwi-plafond. - I-cork iphethwe phezulu.
I-Partir inokuthi "ukuqala" okanye "ukuphuma":
Yonke into ihle / ayikho . - Yonke yaqala kakuhle / imbi. Yaphuma kwisiqalo esihle / esibi.
Usukile kwi-un mauvaise piste. - Siphume endleleni engafanelekanga, ekuqalekeni okubi.
UPartir ungumsizi oncedisayo , oku kuthetha ukuba ngezinye iimeko unako ukwenza ngendlela efanayo nokuba ube okanye ufumane . Kulo mzekelo, xa uhamba udibene nesenzi esingapheliyo kuthetha "ukuhamba ukuze wenze into":
I-Peux-tu iphuma buyter du pain? Ngaba unako ukuphuma uze uthenge isonka?
Uye waphuma i-étudier e-Italy. - Waya kufunda eItali.
Njenge-euphemism, ukuhamba kuthetha "ukufa" okanye "ukudlula":
Mon mari uhambe. - Umyeni wam wadlulela.
I-Partir ingenasiphelo, oko kuthetha ukuba ayikwazi ukulandelwa yinto ecacileyo.
Nangona kunjalo, inokulandelwa ngumboniso kunye nento engapheliyo (umz., Indawo okanye indawo / injongo yokuhamba), okanye ngosuku, ixesha okanye ezinye iinguqulelo.
Ils partent de Paris ehleli. - Bashiya (ukusuka) eParish kusasa.
Xa u-vas-tu uhamba ukuya kwi-chasse? - Uhamba nini ukuzingela nini?
Ukhethile ukuthulula i-université. - Waya ekholejini / waya kwikholeji.
Vuka uhambe apha. - Siya kushiya ngomso.
Ukongeza, uhambo luya kuba neentsingiselo ezahlukeneyo kuxhomekeke kwisilungiselelo esilandelayo.
ukuhamba kwi- + engapheliyo "ukuqala" (ukwenza into, ngokuqhelekileyo ngokukhawuleza): Njengoko, " Ukhethile ukukhala " (Waqala ukukhala, wakhala ngezinyembezi) okanye " Ndiyekile ukuhleka " (Ndaqala ukuhleka, kuhleka).
Ukuphuma kwisigama + kuthetha ukuba "uqale" (ukwenza into ephazamisa into enye): Njengokuba, " Uhambe kwi-digression sans fin. " (Waya kwinto engapheliyo.) kunye " Ne pars pas dans une grande nomsindo. "(Musa ukuhlutha.).
Ukusuka de kuneentsingiselo ezimbini:
"ukuqala" okanye "ukuqala ukusuka": Njengokuba, " I-contrat partira du 3 août. " (Inkontileka iya kuqala ngomhla we-3 Agasti.) kwaye " Yiyona yesibini kwi-gauche. " ( okwesibini ukusuka kwesobunxele.).
"ukuvela kwi": Njengokuba, " I-part of the heart " . (Ivela entliziyweni.) kunye ne " D'où inxalenye yomsindo? " (Le ngxolo isukaphi?).
Ukuhambisa ugalelo + ongapheliyo kuthetha ukuba "ukuqala" (kwaye unike ingcamango yokuqhubeka ixesha elide): Njengoko, " Uhambe ukuthulula i-parler pendant une heure ." (Waqala ukuthetha kwaye wayejonge ngathi wayeya kuhamba iyure.) Kwaye " Elle est parti pour nous raconter sa vie " (Waqala ukusixelela ibali lakhe lobomi.).
Kukho ambalwa amagama aqhelekileyo aseFrentshi ancike ekuphumeni. Kule mininzi yezi zinto, kuya kufuneka udibanise isenzi, usebenzisa oko ufunda kwesi sifundo. Ukusebenzisa ezi zivakalisi ezilula kuya kwenza kube lula ukukhumbula.
ukusuka kwi-- ukusuka (ixesha, umhla, indawo)
ukusuka kwi- maintenant- ukususela ngoku ngoku
ukusuka ku-moment-là - ukususela ngelo xesha
ukusuka kwixesha apho- kungekudala
À vos marques! Prêts? Partez! - Kwiimpawu zakho! Hlela! Hamba!
le nxalenye- apha siya, apha iya
Iilwimi zesiJamani: Ukuqonda i-Current Perfect Timenti
Abalinganiswa boBunye bemiLwazi
Indlela yokufumana iiikopi okanye iimpendulo zee-IRS zakho zerhafu
Amaphupha ephambili kwi-Architecture kaFrank Gehry e-Australia
Isilinganiso semigangatho ye-GRE ngeeNjongo eziPhambili ngo-2014